भक्तपुर दुर्घ’टना: मृ’तक रियाका श्रीमानले उठाए यस्ता प्रश्न, अब के हुन्छ ? – Rapti Khabar
२२ मंसिर, काठमाडौं । भक्तपुरमा आइतबार राति पानै १ बजे भएको सवारी दुर्घ’टनामा ज्या’न गु’माएकी ३० वर्षीया रिया श्रेष्ठको परिवारले दुर्घ’टना योजनाब’द्ध भएको आशंका गरेको छ । त्यसको ग’म्भीर छानबिन गर्न माग गर्दै आमा सम्झनाले महानगरीय प्रहरी वृत्त, ठिमीमा किटानी जा’हेरी पनि दिइसकेकी छन् ।
अनलाइनखबरसँग सम्पर्कमा आएका रियाका पति राजुले सवारी दु’र्घटना हुँदा श्रीमती रियाको मृ’त्यु हुनु र अरु सबै सकुशल रहनु नै शंकाको मुख्य कुरा भएको बताए ।
उनले प्रहरीलाई घट’नाको सत्यतथ्य ग’म्भीर भएर अनुसन्धान गरिदिन पनि भनेका छन् । ‘म पेशाले सवारी चालक हुँ, मलाई अन्याय भएको छ, प्रहरीले हामी जस्ता नागरिकलाई पनि न्याय दिओस्’, उनले भनेका छन् ।
प्रहरीले भने तीब्र गतिमा रहेका कारण ‘दु’र्घटना भएको आशंका गर्दै रियाले सिट बेल्ट नलगाएका कारण उछिट्टिएर ज्या’न गएको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । यद्यपि, काठमाडौं मेडिकल कलेज, दुवाकोटले दिने पो’ष्टमा’र्टम रिपोर्टको आधारमा प्रहरीले थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।
मृ’तकका पति राजुले घट’नाबारे अनलाइनखबरसँग घट’नाको बेलिविस्तार यसरी लगाएका छन् –
बरु नजिकै रहनु भएको सासु आमाले राति ९ बजे कल गर्दा ‘नेट पनि चलेको छैन, टिभी पनि छैन’ म सुतेँ, डिस्टर्ब नगर्नु भनेकी थिइन् । त्यसपछि केटाहरुले (दुर्घ’टनामा परेको कारका सवारी चालक रञ्जित कार्की लगायत) फकाइफुल्याइ लगे, कता केके गरे, थाहा छैन ।
अप’हरण गरेर लगे कि फकाइफुल्याइ गरेर बला’त्कार गर्न लगेका हुन्, घरबाट निस्किएको मलाई बिहान मात्र थाहा भयो । त्यो दिन छोरा पनि सासुआमाको पल्लो घरमा बसेको थियो ।
मध्यराति भएको घ’टना मैले बिहान साढे ९ बजे मात्रै खबर पाएँ । त्यसवेला गाडीमै सुतिरहेको थिएँ, खबर सुन्नेबित्तिकै अत्तालिँदै बिहानकै फ्लाइटबाट काठमाडौँं आएँ ।
म पनि चालक भएको नाताले गाडीको अवस्थाले पनि अलिकति अनुमान लगाउन सक्छु, त्यत्रो दुर्घ’टनामा एक जनाको मृ’त्यु हुँदा कसरी अरु जस्ताको तस्तै रहन सक्छन् ? -अनलाइनखबरबाट